UNGALITHENGA NJANI IKHAYA OLIQESHISAYO KUMNININDLU - IZINDLU EZITHENGISWAYO
Indlela yokwenza ukuba yenzeke: Thenga iKhaya Oliqeshisayo kuMninindlu
Ingabonakala ngathi kukudubula okude, kodwa ukuthenga indlu orentayo kuyo okwangoku kungumzamo wokuthengiswa kwezindlu nomhlaba. Konke oku kuthatha lixesha elincinci, uphando, kunye nendlela yokwazi ukuba nencoko enemveliso kunye nomnini-mhlaba malunga nethemba lokuthenga indawo yakho.
Ukusinceda ukuba siqonde ukuba le meko yokuthenga izindlu ingaqhelekanga yenzekile, sibize iarhente yezindlu ezizodwa UAmy Herman -ye Iqela leSergant kwi-Nest Seekers International-ngobungcali bakhe. Funda ngaphambili ngesikhokelo esingenabubhanxa sokuthenga indlu oyiqeshileyo kumninindlu.
Ithetha ukuthini i-11.11
1. Yazi umnini-mhlaba
UHerman uthi inyathelo lokuqala lokuthenga indlu oyiqeshileyo kukufumanisa okuninzi malunga nomnini-mhlaba, ingakumbi ukuba banepropathi ezininzi okanye banenjongo yokubuyela kwipropathi oyiqeshileyo kubo. Ukuba bahlala kuyo ngenxa yezizathu zemali, ke baqonde ukuba oku kuyanceda ukuhamba kwemali, ucacisa uHerman. Ukuba bangabanini bayo ngenxa yeemvakalelo kunye nezizathu zentlalo (kuba bayabuthanda ubumelwane kwaye bazimisele ukubuyela umva) ukuthengwa kuya kuba nzima kakhulu ngaphandle kokuba ubanike inani abanakukwazi ukwala.
2. Yazi imarike yesakhiwo sakho
Ukuba ikhaya alisiyondlu emileyo, qala ukwenza uphando ngentengiso enokuthelekiswa nesakhiwo sakho ukuze ufumane umbono wexabiso lentengiso yekhaya lakho. Ukuba akukho ntengiso yakutshanje kwesi sakhiwo, uHerman ucebisa ukuba kutshutshiswe iiwebhusayithi zeshishini (njenge I-OLR kwaye StreetEasy usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows ) ukubona ukuba zeziphi iipropathi ezinobungakanani obufanayo, indawo, kunye nemeko eziyifunayo. Jonga konke ukuthengisa okudlulileyo kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo ngendlela umvavanyi anokuyenza ukuvavanya nokumisela ixabiso lentengiso lepropathi.
3. Yenza uphando oluthe kratya
Yiya kwintengiso yokwenyani kwaye ujonge iipropathi ezinokuthelekiswa ezidweliswe ngokubonakalayo kwindawo ohlala kuyo. UHerman ucebisa ukuba kwenziwe uphando ngeepropathi ezintlanu ukuya kwezili-10, kuthathelwa ingqalelo iintsuku kwintengiso, imeko yangoku, kunye nendlela ethelekiswa ngayo nepropathi. Ngale ndlela, unokuba nengxoxo eqondakalayo nomnini-mhlaba malunga nendawo yentengiso kwaye unezibalo zokuxhasa inkxaso yakho oyicebisileyo.
4. Nxibelelana nomnini-mhlaba ngendlela akhetha ngayo yokunxibelelana
U-Herman ucebisa ukuba ube yindawo yokunxibelelana nomnini-mhlaba kwisitayile sonxibelelwano ukuze uphucule amathuba okuthenga. Ukuba umnini-mhlaba ukhetha i-imeyile, thumela i-imeyile ubuze ukuba likho ixesha elifanelekileyo lokuncokola. Kwaye ukuba bakhetha ukuthumela umyalezo, thumela isicatshulwa kwaye ubuze okufanayo. Uyacacisa, Bazise ukuba akukho nto iphosakeleyo- banokuba nexhala lokuba into ayisebenzi okanye ucela isaphulelo kwirente-kwaye unombono ongathanda ukuxoxa ngawo nabo.
5. Musa ukuthetha noxinzelelo
Ixesha yinto yonke, utsho uHerman. Qiniseka ukuba unika umninindlu ixesha elaneleyo lokuxoxa ngombono nawe; hayi kwiintsuku ezingama-30-60 phambi kokuba kuqeshwe isivumelwano sakho. Soloko ungenisa incoko nomnini-ndlu njengokuba ubuya kwenza umthengi omtsha kwintlanganiso yeshishini: ngentlonipho, icebo elicingwe kakuhle, kunye nophando lokuxhasa iingxelo zakho.
UCaroline ngumbhali ohlala kwisiXeko saseNew York. Xa engagubungeli ubugcisa, izinto zangaphakathi, kunye neendlela zokuphila zabantu abadumileyo, uhlala ethenga iiteki, ukutya iikeyiki, okanye ukuxhoma imibhinqo yakhe yokuhlangula, iDaisy kunye neDaffodil.
Yithenge ngokungathi Kushushu: Izinto ezili-10 zeVintage ezaziwa kakhulu, ngokweeNtengiso
Izinto ezili-13 ezimangalisayo ze-Alexa zinokukunceda ukuba uzenze
Uyikhetha njani i-Grout elungileyo yeMisebenzi yeTayile
Iimfihlo ezi-8 ezilula eziya kwiKhaya elingenaThuli ngonaphakade
Ezona zixeko zixhaphakileyo ezi-6 zezinja eMelika, ngokweNja yeNgcali
Izizathu ezi-3 zokuba kutheni ubona i-666-Intsingiselo ye-666
Umboniso omtsha 'weeKheribhithi zezilwanyana' ujongana noPhuculo oluPhezulu lwezilwanyana zasekhaya
Iimfihlo eziNcinci zeNdawo: Yiya ixesha elide nasezantsi ngeConsole
Iifayile zeBhedi ezi-5 ze-DIY ezakhiwe kwindawo yokugcina
Iingcebiso + Amaqhinga: Ungayibona njani imatrasi ecocekileyo kunye nokulala
Iikhitshi zokulungisa iKhitshi: I-20 enkulu ngaphambi & emva koTshintsho kuHlahlo-lwabiwo mali
Ngaba ziiNdonga eziMhlophe ezona ziSixhobo seMfihlakalo zokuHombisa?
UMlingo weVenkile kaDade weAnthropologie, eTerrain
Ixesha elide, elisezantsi liQhinga loMyili elingasokuze lisilele
ukubaluleka kwe10 10
lithetha ntoni i-222
ngu-1010 inani leengelosi
Ithetha ntoni i-000
Ithetha ukuthini xa ubona i1212